Taliska AMiSOM oo sheegay in laqaadayo howl galada qeybta 3aad ee Gobalda dhexe | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Taliska AMiSOM oo sheegay in laqaadayo howl galada qeybta 3aad ee...
Taliska AMiSOM oo sheegay in laqaadayo howl galada qeybta 3aad ee Gobalda dhexe
Taliska AMISOM ayaa ka warbixiyay howl galada ka socda gobolada dalka iyo deegaanadii u dambeeyay ee Al-Shabaab laga qabsaday, iyadoo la bixiyay amar ah in la qaado howl galka qeybta 3aad ee Gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Afhayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xumad ayaa sheegay inay soo gaba gabeeyeen howl galka qeybta sadddexaad ee ka socda gobolada Gedo, Bay iyo Bakool, kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay Ciidamada Itoobiya ee ka socda AMISOM la wareegeen degmooyin dhowr ah.
“Hadi ay tahay howl galada qeybta 3aad waa ka baxnay, qeybta afaraad ee Hiiraan iyo Galgaduud ayaa bilaabanaya, amarada waa baxee, madaxda joogta Air Porka ayana siiyay qolo kasta amarka iyo farsamada looga baahan yahay”ayuu yiri Col. Cali Aadan Xumad oo la hadlay idaacada VOA.
Ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo maalmihii la soo dhaafay ay soo galeen, waxaana ciidamadan ku wajahan yihiin degmooyinka Ceelbuur, Buulo Burde iyo deegaano kale.
Kalasoco warar xiiso badan.
Previous articleSuuqa hubka ee magaalada Muqdisho.
Next articleKulan lagu wacyi galinayo dhalinyarada magaalda Muqdisho oo manta lagu qabtay degmada Yaaqshiid